काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाकः अग्ला पुल बनाउन छानिए ६ कम्पनी, कुन–कुन ?
डीपीआर जिम्मा कुन कम्पनीलाई ? कहिले हुन्छ सम्पन्न ?
| 2018-10-15 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ | काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाकमा अग्ला पुल निर्माण गर्न नेपाली सेनाले प्रारम्भिक चरणमा ६ वटा कम्पनी छनोट गरेको छ।
द्रुतमार्गमा निर्माण हुने ९९ वटा पुलमध्ये ६२ वटा अग्ला पुल बनाउन सेनाले इन्जिनियरिङ प्रोकुमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा काम गर्ने गरी कम्पनी छनोट गरेको हो ।
जसअन्तर्गत चिनियाँ र एक टर्किस कम्पनी प्रारम्भिक चरणमा छनोट गरिएको सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए । ती अग्ला पुल निर्माणका लागि २०७४ चैतमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
जसमा १५ वटा कम्पनीले पुल निर्माणमा इच्छा व्यक्त गर्दै आवेदन गरेका थिए । तीमध्ये नौ कम्पनी सेनाको मूल्यांकनबाट बाहिरिए ।
कुन–कुन कम्पनी छनोट ?
टर्किस कम्पनी डोगुस इन्साट भे टिकारेट एएस एन्ड माक्योल इन्साट सनायी टुरिजम भे टिकारेटको जोइन्ट भेन्चर छनोट भएको हो।
चिनियाँ कम्पनीमा स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन, हुनान रोड एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी, चाइना रेलवे २० ब्युरो ग्रुप कर्पाेरेसन छन् ।
यसैगरी, चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप र चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीको जोइन्ट भेन्चर, लोङजियान रोड एन्ड ब्रिज कम्पनी परेका पनि छनोट भएका छन् ।
सेनाले प्रारम्भिक चरणमा छनोट भएका कम्पनीलाई रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) पठाइसकेको छ ।
प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार आरएफपीमा प्राप्त गरेका कम्पनीले पुलकोे डिजाइन र लागत मूल्य समेटेर सेनालाई पत्र पठाउनेछन् । ‘अब्बल डिजाइन भएका कम्पनी पुल निर्माणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्’ उनले भने ‘डिजान स्वीकृत भएका कम्पनीमध्येबाट न्यूनतम अंक कबुल गर्ने कम्पनीले पुलको ठेक्का पाउनेछ।’
डीपीआर जिम्मा कुन कम्पनीलाई ?
द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को जिम्मा कोरियन कम्पनी सुसङ इन्जिनियरिङलाई दिइएको छ ।
उक्त कम्पनीले ४ कात्तिकदेखि डीपीआर निर्माण थाल्ने गरी एक सय पाँच दिनमा सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
सन् २००८ सालमा एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययन तथा नेपाली सेनाले गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भे र डिजाइनका आधारमा डीपीआर तयार हुने भएको छ ।
चार वर्षभित्रमा द्रुतमार्ग बनाइ सक्नुपर्ने
मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साल वैशाख २१ गते सेनाको व्यवस्थापनमा द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा दिएको थियो।
सोही निर्णयअनुसार २०७४ साल साउन २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको द्रुतमार्ग सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको चार वर्षभित्रमा द्रुतमार्ग बनाइ सक्नुपर्ने सम्झौता छ ।
सोमबार, २९ असोज, ०७५